Dai 14, 2021 by Martin6
Tichifunga mamiriro azvino, vazhinji venyu munogona kunge muchipinda misangano yenyu yebasa kana makirasi pa Zoom nharembozha. Uye dzimwe nguva, iwe ungazodikanwa kuratidza yako foni skrini muZoom vhidhiyo kufona, kungave kuratidza basa rako, govera mharidzo kana tsanangura chimwe chinhu. Nekutenda, pane nzira dzakawanda dzaungaite izvozvo. Muchikamu chino, isu tinokuudza nzira nhatu dzakasiyana dzeku shandisa iPhone yako kana Android foni skrini mumusangano weZoom.
Goverana iPhone kana Android Runhare Screen mumusangano weZoom
Zoom nharembozha yeApple neIOS ine yakavakirwa-mukati sarudzo yekugovana foni skrini mune Zoom vhidhiyo kufona. Iwe unogona kutanga musangano neako skrini ichiratidzira kumusoro kare kana kuichinja panguva yemusangano unoenderera. Uyezve, iwe unogona kunyange kugovera yako skrini yefoni kuburikidza nePC kana uchida. Pazasi, takurukura imwe neimwe nzira zvakadzama.
1. Usati Wajoina Musangano
Vhura iyo Zoom app pane yako Android foni.
Ita shuwa kuti uri mu Sangana & Chat Tab.
Pano, chengeta Goverana Screen bhatani.
Zvino, pinda yako Kugovana Kiyi or Musangano ID. Dhinda OK.
Vhura iyo Zoom app pane yako iPhone.
Mu Sangana & Chat tebhu, tinya iyo Goverana Screen bhatani.
Pindai zvenyu Kugovana Kiyi or Musangano ID.
Pinda musangano password kana ukabvunzwa uye pinda OK.
"Mugadziri Chete Ndiye Anogona Kugovana Screen" Kanganiso
Paunenge uchiedza kugovana skrini yefoni yako, unogona kusangana ne "chete muridzi anogona kugovana musangano uno" kukanganisa. Kana hongu, kumbira wako anomugonesa kuti agone kutora chikamu chekugovana nekutora museve padyo ne Goverana Screen > Yepamberi Kugovana Sarudzo > sarudza Vese Vadzidzi pasi pemusoro unoti "Ndiani anogona kugovera?"
Kana iyo inomiririra iri paZoom mobile app, vabvunze kuti vatore iyo More bhatani pazasi kurudyi. Wobva wavhura peji reMusangano Zvirongwa Goverana Screen pasi pemusoro unoti “Bvumira Vadzidzi.” Kana, iwe unogona kungovabvunza ivo kuti vakuite iwe mugamuchiri.
2. Panguva Yemusangano Unoenderera Mberi
Vhura Zoom uyejoina musangano.
Paunenge uri mumusangano, tinya pa mugove kuzasi.
Mupumburu uye sarudza Screen kubva pamenyu.
Kana iyo pop-up yaonekwa, tinya Tanga ikozvino.
Zoom ikozvino inotanga kugovana zvemukati mefoni yako skrini mune vamwe vhidhiyo kufona. Iwe haugone kuona yemusangano gallery, asi vamwe vanozogona kuona yako skrini zvirimo.
Iwe zvakare uchawana zvinoyangarara zvinodzora iwe uchigovana iyo skrini Unogona kuzvishandisa kutsanangura pachiratidziro, batidza odhiyo yako uye nekumisa chaiko kugovana kwechidzitiro neanodzora zvinochinja.
Paunenge uri mumusangano, tinya pa Goverana Zvemukati kuzasi.
sarudza Screen kubva pane zviripo zviripo.
Kana iyo pop-up menyu yaonekwa, tinya Kutanga Broadcast.
Mushure mekuverengera kupfupi, zvinokuzivisa iwe kuti urikugovana skrini rako nemunhu wese ari mumusangano.
PaIOS, haugone kuwana zvemhando yepamusoro zvinodzora. Nekudaro, iwe unogona kumira kugovana iyo skrini nekutepa iyo tsvuku yekuzivisa bha uye kudzvanya Mira.
3. Goverana Screen yefoni neZoom Desktop Mutengi
Iwe unoda here kugovera yako skrini yefoni nevamwe uchienda kumusangano pakombuta yako? Zvakanaka, zviri nyore, kunyanya kana uine iPhone kana iPad.
Tisati tatanga, ita shuwa kuti ese komputa uye iPhone kana iPad zvakabatana kune imwechete Wifi network. Iwe unogona zvakare kugadzira hotspot kubva kune imwe foni uye ubatanidze iwo maviri madhijitari.
Vhura Zoom desktop mutengi uye joina musangano.
Click on Goverana Screen kuzasi.
sarudza iPhone / iPad uye baya mugove.
Isa iyo plugin kana uchikurudzirwa.
Uchaona ikozvino mirairo yekubatanidza yako iPhone.
Pa iPhone yako:
Joinha iyo Wifi network kana isati yatove.
Vhura Control Center uye tinya pa Screen Mirroring.
Sarudza iyo Zoom-komputa yako kuita.
Chidzitiro chako che iPhone chichagovaniswa otomatiki mumusangano weZoom zvisina waya. Kunyange zvakadaro, ita shuwa kuti iwe une inomhanya-mhanya internet; zvimwe, iwe ungasangana nemamwe mabwepa uchigovana skrini.
Nehurombo, Zoom haina sarudzo yakanangana yekugovana iyo Android foni sikirini kubva kune desktop desktop. Zvakadaro, une sarudzo mbiri:
Isa iyo Zoom app pafoni yako ,joinha musangano neakaundi account uye shandisa sarudzo yekugovana skrini mune Zoom app.
OR girazi foni yako yefoni paPC uchishandisa yechitatu-bato software. Wobva washandisa iyo skrini yekugovana sarudzo muZoom desktop mutengi. Ndakazviita ndichishandisa AirDroid pachigadzirwa changu. Chero zvakadaro, hezvino nzira nhatu dzekuratidzira yako Android kuratidza kuPC yako.
Iri raive gwara rakadzama rekuti iwe ungagovane sei yako iPhone kana Android foni sikirini mumusangano weZoom. Kunze kwenzira yechinyakare yekugovana skrini kubva mukati meapp, tataura zvakare kuti ungazviita sei kubva kuZoom mutengi pakombuta yako. Zvisinei, nei uchiwanzogovana skrini yefoni yako muZoom?